VPM - အမှုန့် သန့်စင်စက် DR-SONIC ENGINEERING CO., LTD. - Blog
VPM - အမှုန့် သန့်စင်စက် DR-SONIC ENGINEERING CO., LTD.
January 16, 2019, 9:34 pm / tysonmbpdm.thezenweb.com
VPM - အမှုန့် သန့်စင်စက်
"VPM ဖြတ်တောက်မည့် အဆင့်များ တစ်ဆင့်၊ နှစ်ဆင့်၊ သုံးဆင့်အပေါ်မူတည်၍ VPM ၏အရွယိအစားကို ၉၀၀ မမ၊ ၁၂၀၀ မမ၊ ၁၅၀၀မမ နှင် ၂၀၀၀ မမ အထိ ရရှိနိုင်ပါသည်။ ထိုဝင်ဆန့်နိုင်မှုမြင့်မားသော VPM စနစ်ကို ၃၀မိုက်ခရိုအထိ ရှိသော
သန့်စင်နေသော သိုမဟုတ် အလွန်သေးငယ်သောပေါင်ဒါမှုန့်များ နှင့် သတ္တုအစိုင်ခဲများ စကင်ပြုလုပ်ခြင်း နှင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းတွင်အသုံးပြုသည်။
မော်ဒယ်: VPM-900, VPM-1200, VPM-1500, VPM-2000
- ထုလုံးရှည်ပုံ အပေါ်ပိုင်း အကွင်း
- အဆင့်တစ်ဆင့်တည်းသို့မဟုတ် အဆင့်များစွာဖြင့်လဲရရှိနိုင်ပါသည်၊
- စက်ဝိုင်းပုံချုပ် သို့မဟုတ် လျင်မြန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်သော အရစ်ပါချုပ်များ
- ဆက်စပ်နေသောအစိတ်ပိုင်းအားလုံးကို AISI304အဆင့်ရှိ သံချေးမတက်သောသံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်ထားပါသည်။
- ပုံသေအခြေခံ ရွေးချယ်စရာ ဘီးအပေါ် မောင်တ့်(mount)
- လျောစောက်ပုံအောက်ခြေကြောင့် ပမာဏများများဝင့်ဆံပါသည်။
- ၁၅၀၀RPM၊ IP65အဆင့်ရှိ မော်တာ
- FDAထောက်ခံချက်နှင့် ATEX အသိမှတ်ပြုလက်မှတ်ရရှိပြီး။
Ultrasonic စနစ် သို့မဟုတ် အလုံး သန့်စင်စနစ်(food and non food အဆင့်)ကဲ့သို့ အော်တို့ဇကာသန့်စင်စနစ်
- ရွေးချယ်ထားသောပေါင်ဒါများနှင့် အစေ့ ထုတ်ကုန်များအတွက်လိုအပ်စောစကင်စနစ် (ကြီးမားသောပမာဏ၊ အမျိုးမျိုးသော ဖြတ်ပွိုင့်များ)
- လေးထောင်ပုံဇကာသန့်စင်စနစ်ကြောင့် စကင်ပြုလုပ်ရာတွင်တိကျမှုရှိသည်။
- များစွာသော ဖြတ် ပွိုင့်များအတွက်စကင်စနစ်
- လျင်မြန်သော High efficiency အညစ်ကြေးစွန့်ပစ်စနစ်၊ များပြားသော ဝင့်ဆံနိုင်စွမ်း နှင့် ကြာရှည်ခံသော ဇကာသက်တမ်း။
- ကောင်းမွန်စွာတည်ဆောက်ထားသောကိုယ်ထည့်ကြောင့် ယုံကြည်စိတ်ချစွာအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
- ၂နှစ်အာမခံပါသော တုန်ခါမော်တာ
VPM line is offered at sizes of 900 mm, 1200 mm, 1500 mm and 2000 mm, all of which can have one, two or three decks to enable multiple cut sizes. These high capacity vibrating sieve machines are most commonly used for screening and separation of very fine or atomised powders (down to 30 micron) and solid materials at high throughputs.
Models: VPM-900, VPM-1200, VPM-1500, VPM-2000
- Cylindrical upper band
- Available with single or multiple decks
- Ring clamping system or quick-release band clamps
- All contact parts in AISI 304 stainless steel
- Fixed base with an option to mount on wheels
- Sloped bottom to achieve high capacity
- Standard motor 1,500 RPM, IP65
- FDA-approved and ATEX certified
- Automatic mesh cleaning system such as ultrasonic
or ball cleaning systems (food and non–food grade).
- Selection of powders and granulated products needing to be
screened atahigh capacity and multiple cut points.
- Precision screening due to square-mesh
- Screening at multiple cut points
- Fast waste discharge, leading to greater capacity
and high lifetime of the mesh
- High reliability due to its solid structure
- Emits low noise
- Oil, Mining & Minerals
- Aggregates & Construction.
DR-Sonic Engineering Co., Ltd.သည် ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် မတည်ရင်းနီးငွေ ဘတ် ၁၀ သန်း ဖြင့်စတင်ဖွဲ more info့ စည်းခဲ့ပါသည်။DR-Sonic Engineering Co., Ltd.သည် ခေတ်မီသောစက်ပစ္စည်းများကို သုံးစွဲသူတို့၏လိုအပ်ချက်အတိုင်းပြည့်မှီအောင် ထောက်ပံပေးနိုင်ရန် လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။ အရည်သွေးမြင့်မားသော ထုတ်ကုန်များကို သက်သာသောဈေးနှုန်းဖြင့် သုံးစွဲသူများကို ထောက်ပံ့နိုင်ရန်မှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့မှာ အသင့်ရှိသော စက်ပစ္စည်း နည်းပညာများနှင့် လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ လုပ်ငန်းခွင် ပြဿာနာ များကို အရည်အသွေးကောင်းများဖြင့်ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်
December 23, 2018, 10:53 pm / tysonmbpdm.thezenweb.com
เราพร้อมให้บริการในเขตพื้นที่ หนองจอก ลาดกระบัง บางขุนเทียน คลองสามวา มีนบุรี ประเวศ ทวีวัฒนา บางแค บางเขน สายไหม หนองแขม บางบอน จตุจักร ทุ่งครุ ตลิ่งชัน บางกะปิ สะพานสูง จอมทอง บึงกุ่ม สวนหลวง ดอนเมือง หลักสี่ ลาดพร้าว วังทองหลาง บางนา ภาษีเจริญ คันนายาว ยานนาวา ราษฎร์บูรณะ ห้วยขวาง พระโขนง คลองเตย วัฒนา บางกอกน้อย บางซื่อ บางพลัด บางคอแหลม ดุสิต พญาไท สาทร ธนบุรี ดินแดง ปทุมวัน ราชเทวี บางกอกใหญ่ คลองสาน บางรัก พระนคร พัดลมอุตสาหกรรม ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และทั่วประเทศ
December 19, 2018, 5:04 am / tysonmbpdm.thezenweb.com
เราพร้อมให้บริการในเขตพื้นที่ หนองจอก ลาดกระบัง บางขุนเทียน คลองสามวา มีนบุรี ประเวศ ทวีวัฒนา บางแค บางเขน สายไหม หนองแขม บางบอน จตุจักร ทุ่งครุ ตลิ่งชัน พัดลมโรงงาน บางกะปิ สะพานสูง จอมทอง บึงกุ่ม สวนหลวง ดอนเมือง หลักสี่ ลาดพร้าว วังทองหลาง บางนา ภาษีเจริญ คันนายาว ยานนาวา ราษฎร์บูรณะ ห้วยขวาง พระโขนง คลองเตย วัฒนา บางกอกน้อย บางซื่อ บางพลัด บางคอแหลม ดุสิต พญาไท สาทร ธนบุรี ดินแดง ปทุมวัน ราชเทวี บางกอกใหญ่ คลองสาน บางรัก พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และทั่วประเทศ
December 5, 2018, 11:47 pm / tysonmbpdm.thezenweb.com
- ผลิตเครื่องบรรจุสินค้าอัตโนมัติ บริษัท อาร์แอนด์บี ฟู้ดส์ซัพพลาย จำกัด
November 22, 2018, 4:10 am / tysonmbpdm.thezenweb.com
ฮีตคูล ออโต้ วางระบบชิลเลอร์ อีควิปเมนท์ บจก.